Firm ukuthungwa iqoqo screen Abavikeli nomzimba BodyGuardz Zempi for BlackBerry 9790 Bold — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Firm ukuthungwa iqoqo screen Abavikeli nomzimba BodyGuardz Zempi for BlackBerry 9790 Bold
Beka "2 in 1": Kuvikela umshini ngisho kusukela imihuzuko emibi futhi siguqule ukubonakala kwakhe. Isidingo ukugqoka isikhwama ayisekho! Eliphezulu kanye material luhlala isikhathi eside. Imfashini ukuthungwa «carbon fiber».
Film BodyGuardz Zempi — okubekwe "izimiselo 2 in 1": it thembeke livikela kudivayisi yakho ngesikhathi esifanayo uguqule ukubukeka kwayo! Isidingo ukugqoka isikhwama ubalekela njengoba ifilimu amboze yonke smartphone.
High-quality, impahla mncane futhi nezimo, kodwa okumangalisayo ukuthi okuhlala isikhathi eside. I kit sihlanganisa iqoqo opaque films ngomala sezindlu kanye ifilimu esobala for esibukweni. Isethi yenziwe ikhumbula ukucushwa kwe 9790, impela Uyaphinda ezakheke, it has cutouts ezidingekayo. Lapho nokuxebuka off the film akabashiyi izibazi. Le ngxenye Umzimba ukuthungwa «carbon fiber» — imfashini, esiwusizo futhi isikhathi eside. Ngeke ebonakalayo imihuzuko emihle, amabala, izigxivizo zeminwe. Umugqa siqukethe imibala emithathu zakudala, konke okuzokwenza ivumelana ngokuphelele nedivaysi.
Sticker zokuzivikela ifilimu — hhayi obangela ezimnandi ngisho onguchwepheshe. Ukuze enze inqubo, kufanele ukhambisane nayo ubuchwepheshe: ukuze alungiselele izimo ezifanele ukusebenzisa uketshezi ekhethekile nekhadi uyisuse. Uma ungazizwa amandla okubhekana nale msebenzi, sicela uxhumane ongoti bethu: Sticker ifilimu zokuzivikela esibukweni futhi izindlu.
Appearance, image and texture: plain colored, carbon
Product type: Protective sticker → For screen and housing bundle → Colored
Firm ukuthungwa iqoqo screen Abavikeli nomzimba BodyGuardz Zempi for BlackBerry 9790 Bold, Black ukuthungwa "carbon fiber" BZ-ACBB9-1111 ●
Firm ukuthungwa iqoqo screen Abavikeli nomzimba BodyGuardz Zempi for BlackBerry 9790 Bold, White, yesimomfanekiso "carbon fiber" BZ-ACWB9-1111 ●
Firm ukuthungwa iqoqo screen Abavikeli nomzimba BodyGuardz Zempi for BlackBerry 9790 Bold, ukuthungwa Red "carbon fiber" BZ-ACRB9-1111 ●
Price: $51 $2
Black ukuthungwa "carbon fiber" BZ-ACBB9-1111
White, yesimomfanekiso "carbon fiber" BZ-ACWB9-1111
ukuthungwa Red "carbon fiber" BZ-ACRB9-1111